Amathebulethi aphazamisa ukukhulelwa
Ubuhle nempilo Ukubonisana kwabesifazane
Akukhona njalo ukuthi ukukhulelwa kulinde isikhathi eside futhi kuhlelwe. Kwezinye izimo, ngenxa yezizathu zomuntu siqu noma ezibonakalayo, owesifazane akakwazi ukushiya umntwana. Futhi ngaphambi kwakhe kukhona umbuzo, ukukhipha isisu kungathinteki kanjani umzimba wakhe nesimo sengqondo. Kulesi simo, kuzoba khona amaphilisi okuphazamisa ukukhulelwa futhi kuyindlela enhle ezinyangeni zokuqala emva kokukhulelwa.
Indlela yokukhipha ukukhulelwa okungadingeki ngokusebenzisa amaphilisi?
Sebenzisa le ndlela yokukhipha isisu iyamukeleka uma isikhathi sincane kakhulu futhi singadluli amasonto angu-6-7. Ngokungafani nokukhipha isisu okuvamile, amaphilisi omlomo aphazamisa ukukhulelwa akhiphe umonakalo kumabhungane omzimba wesibeletho nesisu somlomo wesibeletho. Ngakho-ke, ingozi yokuvuvukala nokutheleleka kuncishisiwe. Ukukhipha isisu okunjalo kufana nokuya esikhathini, kodwa kuningi kakhulu.
Noma kunjalo, kufanele kukhunjulwe ukuthi amalungiselelo anjalo asenomthelela omkhulu emzimbeni. Ngakho-ke, umbuzo wamaphilisi okuphuza, ukuphazamisa ukukhulelwa, kuyadingeka ukubuza udokotela, kunokuba uhlanganyele ekuziphatheni. Phakathi kwezidakamizwa ezingasetshenziswa, okuvamile kakhulu okulandelayo:
I-Postinor. Lesi esinye sezidakamizwa ezithandwa kakhulu ezihloselwe ukukhulelwa okuphuthumayo. Odokotela abaningi, etshela iziguli ukuthi zibizwa kanjani amaphilisi, okuphazamisa ngokushesha ukukhulelwa, kuthiwa yilo muthi. Uma ungazange usebenzise ukukhulelwa ngesikhathi socansi, kufanele uthenge ngokushesha i-Postinor, isithako esisebenzayo esiyinhloko se-levonorgestrel. Libhekisela kumaphilisi aphazamisa ukukhulelwa emahoreni angu-48. Kule nkathi yesikhathi kubalulekile ukuthatha iphilisi elilodwa, kanti elilandelayo - emahoreni angu-12. Khona-ke kuma-85% wamacala, ukukhulelwa ngeke kwenzeke.
Mifegin. Ivimbela ukukhiqizwa kwe-progesterone, okubangela ukulahlwa kombungu, ukuchotshozwa kwesibeletho kanye nokukhiqizwa kweqanda lesisu. Ukusheshisa le nqubo, kanye nesidakamizwa kuthatha i-prostaglandins, ivuselele izicathulo zomzimba. Uma uzibuza ukuthi yiziphi amaphilisi eziphazamisa ukukhulelwa ezinkathini zokuqala, lokhu kuyindlela eyamukelekayo, kodwa kuhle ukuwasebenzisa kuze kube amasonto ayisithupha.
I-Mifepristone. Lokhu kungenye yemithi yesimanje kakhulu yokuvikela isisu sokukhipha isisu. Ukusetshenziswa kwalo kuvunyelwe amasonto angama-9, futhi ukuvuselela ukulwa okuholela ekukhulelweni kwesisu, kuyadingeka ukuthatha naye naye nge- Saitotec. Lezi amaphilisi, ukuphazamisa ukukhulelwa ezinkathini zokuqala, kuthiwa yiMitholian.
I-Pencrofton. Cishe akukho nemiphumela emibi futhi isetshenzisiwe uma isikhathi sokubeletha singekho amasonto ayisithupha. Ngokuvamile, udokotela ubeka ukuba uthathe amathebulethi amathathu ngesikhathi futhi abheke isimo sesiguli. Ukwamukelwa okuphindaphindiwe kungenzeka kuphela emva kwezinsuku ezingu-3-4.
Amafutha anezinhlobonhlobo ezinamafutha we-mammary
I-Ginepristone yokukhipha isisu
Ukuhluleka kwama-Hormone kubesifazane - izimpawu, ukwelashwa
Kuthiwani uma ngibambelela ku-tampon?
Ungamisa kanjani ukuphuma kwamagciwane ekhaya?
Ama-browns nyanga zonke yizimbangela
I-Cystoma ye-ovary efanele
Itiye le-Hippy ye-lactation
Izinhlobo zezibuko zokukhanya
Igalari Kazwelonke Yezobuciko
I-Jeans - Spring-Summer 2014
Abafundi abane-Down syndrome bathatha uthisha ngaphansi komqhele
U-Liam Neeson oneminyaka engu-63 ubudala noKristen Stewart oneminyaka engu-25 ubudala baphawule ngamanga ngamazwi akhe
Indlela yokwandisa okuqukethwe kwamafutha ebisi kumama okhulelwa?
Kuzoshicilelwa i-biography emibili yemidwebo ye-Naomi Campbell
Ngingawashayela amazinyo ami nge-soda?
Icon "I-Wall Inviolable" - okusho ukuthi, yini ewusizo?
U-Kate Winslet no-Leonardo DiCaprio: ukuhlangana namaqhawe "we-Titanic" angasebenzisa izimanga
Yini okufanele ugqoke ingubo ngaphandle kwemikhono?
Yini okufanele ugqoke ijazi elimpunga?
Indlela yokuthuthukisa inkumbulo nokunakwa?
I-Narva - izivakashi ezikhangayo
Amathebulethi avela ku-cystitis kubantu besifazane - ukwelashwa okusheshayo
Ungabilisa kanjani iqanda?
I-Museum of Torture (Prague)